tag ကို: တရားဝင် binding | Martech Zone
tag: တရားဝင် binding
ငါသည်ဤဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာပစ္စည်းပစ္စယများ၏ထိပ်ပေါ်မှာပေါ့တူသောတခါတရံငါခံစားရ ... ငါအီးမေးလ်တစ်ခုကိုမြင်ရသည်အခြားကြိမ်ငါဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်နှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်လက်မှတ်အကြားခြားနားချက်ကိုသိရန်နှင့်ငါမရှိခဲ့ပါလျှင်ငါမေး Silanis ကနေယနေ့လက်ခံရရှိတဦးတည်းတူသောမှတဆင့်လာ စိတ်ကူးတစ်ခုခြားနားချက်ရှိခဲ့သည်။ Doh! အဲဒီမှာကွာခြားချက်ဖြစ်ပြီး, ကအတော်လေးကျယ်ပြန်တဦးတည်းပဲ! E-လက်မှတ်အဓိပ္ပာယ်ပါ E-လက်မှတ်သို့မဟုတ်: ဒီမှာ Silanis တစ်ခုချင်းစီမှသက်တမ်းအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်